Kungani iSnapchat ivuselela Ukumaketha Kwedijithali | Martech Zone
Izinombolo ziyahlaba umxhwele. #Snapchat inama abasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-100 abasebenza nsuku zonke nokubukwa kwamavidiyo nsuku zonke angaphezu kwezigidigidi eziyi-10, njengako idatha yangaphakathi. Inethiwekhi yokuxhumana nomphakathi iba ngumdlali ophambili esikhathini esizayo sokumaketha kwedijithali.
Kusukela yethulwa ngo-2011 lokhu isikhashana inethiwekhi ikhule ngokushesha, ikakhulukazi phakathi kwesizukulwane sedijithali sendabuko sabasebenzisi beselula kuphela. Yipulatifomu yemidiya yezenhlalo yobuso bakho, enobuso obusezingeni eliphezulu lokuzibandakanya.
I-Snapchat yinethiwekhi lapho umkhiqizo ufuna khona umsebenzisi ukuthi athumele umlayezo owenziwe waba ngowakhe futhi akhulume ngamakhodi awazwisisayo. Yinethiwekhi ezuze lokho ukukhangisa obekulangazelela iminyaka eyikhulu eyedlule: ukuxhumana okukodwa kokukodwa.
Ukuthatha kwayo okusha ekukhiqizweni kokuqukethwe ngezithombe noma ama-video snap amasekhondi ayi-10 anyamalala kungakapheli isikhathi esibekiwe samahora angama-24 kushintshe indlela esisebenzisa ngayo imithombo yezokuxhumana nokuguqula indlela esibuka ngayo amavidiyo - manje aqonde thwi futhi ahambayo. Lokhu kubonisa ithuba elikhulu labakhangisi nabakhangisi. Inikeza isikhala esibalulekile sokuxhumana nokuxhumana nezithameli zakho ngendlela yomuntu siqu, eyiqiniso.
Njengoba i-Snapchat iyinethiwekhi ekhethwe ngabantu abasha, futhi iyindawo okufanele uye kuyo ukuze uthinte inani labantu abathandwa kakhulu beMillennial, okuyisigaba esiya ngokuba nzima ukuthola ezinye iziteshi.
Namuhla, ama-63% wabasebenzisi be- # Snapchat baphakathi kweminyaka eyi-13 nengama-24 ubudala, ngokusho kuka imininingwane enikezwe yinkampani. Futhi noma ngabe abasebenzisi abasebancane kungenzeka ukuthi abanawo ama-akhawunti asebhange noma amakhadi esikweletu, imvamisa kuyizikhathi zalabo abakha izitayela, banqume ukuthenga futhi bathonye izinqumo zabathengi zabazali babo.
Kungani ufake iSnapchat isu lakho lokumaketha?
Dala ukuqwashisa komkhiqizo: I-Snapchat iyindlela ephumelelayo yokwakha ukuvezwa kwebhizinisi lakho nokuxhumana namagugu womkhiqizo ngokuxoxa izindaba. Yenza ukuba khona komkhiqizo wakho kuphile futhi unikeze izilaleli zakho okuqukethwe kwenani –ukusetshenziswa kwamavidiyo okuthwebula ukuze wabelane ngama-tutorials asheshayo kanye / noma amathiphu nemiboniso yomkhiqizo, ngokwesibonelo.
Yenza ibhizinisi lakho libe ngokobuntu: Ukubonisa ngale kungukhiye ekuxhumaneni namakhasimende akho ezingeni eliyiqiniso futhi i-Snapchat ikunikeze lokhu nje. Thumela ngemuva kwezigcawu ezivela ebhizinisini lakho futhi ubonise imisebenzi yansuku zonke amakhasimende angavamile ukuyibona.
Khuthaza amakhasimende: Bandakanya amakhasimende futhi ubakhuthaze ukuthi benze okuthile. Nikeza ukumbozwa okubukhoma kusuka komunye wemicimbi yakho, hlala ukubuka kuqala kwemikhiqizo noma izinsizakalo ezizayo bese usebenzisa izipho nemincintiswano.
Ungabafinyelela kanjani abagqugquzeli abafanele be-Snapchat?
Imikhankaso yokuthengisa enethonya ingadla isikhathi esiningi ngokungakhathalekile ukuthi iyiphi inkundla yokuxhumana. Ukusebenzisa indawo yezimakethe ezinethonya kuyisihluthulelo sokwenza ngcono inqubo yokuletha okuqukethwe okungabeki kalula kanye ne-ROI eqinile.
SocialPubli.com, okuholayo imakethe yokuthonya yamasiko amaningi, muva nje kube yipulatifomu yokuqala ezenzakalelayo eyi-100% yokunika amandla ukusebenzisana kwabathonya umkhiqizo ku-Snapchat.
Imakethe iveza imodeli emisha yokuxhumana nomphakathi eyakhelwe phezu kwentando yeningi yesikhala sokubambisana nomkhiqizo. Kuvulelekile kubo bonke abasebenzisi bezokuxhumana ukuthi babhalise futhi baqale ukuthola inzuzo ngomsebenzi wabo wezokuxhumana. Ama-Brands, ama-ejensi kanye namabhizinisi amancane ukuya kwamaphakathi angaqalisa umkhankaso ngaphandle kwesabelomali esincane esidingekayo.
ISocialPubli.com ixhuma imikhiqizo enabagqugquzeli abangaphezu kuka-12,500 20 abavela emazweni angama-XNUMX + abanika amandla imikhankaso yezokuxhumana yezokuxhumana kuyo yonke i-Instagram, Twitter, Youtube, blogs, futhi manje nge-Snapchat.
Abathonya bangahlukaniswa basebenzise izindlela ezingama-25 kufaka phakathi izinketho zokukhomba zendawo, ubulili, izindawo ezithakazelisayo, iminyaka, inani labalandeli nabanye.
Tags: ukumaketha kwamathonyaukuthonya esigcawiniSnapchatabagqugquzeli be-snapchatumphakathi publieyokuzikungani kufaka phakathi i-snapchat
U-Ismael uyi-CEO ku SocialPubli.com selokhu ukuqala kwethulwa ngoJulayi 2015. Ubuye abe yi-CEO ye-ejensi yezentengiso online, i-Internet República, inkampani engumzali yeSocialPubli.com. U-Ismael ufundisa ohlelweni lwe-Master Internet Business (MIB), i-ESIC ne-Instituto de Empresa. Muva nje ubonwe njengomunye wezimakethe ezingama-50 eziphezulu zaseSpain zokumaketha nokuhweba
Ukungathandwa kwabathelisi esikubona kanye Namaqiniso Kuzoba Isidingo Kwezentengiso
Ama-Cloudwords: Ukumaketha Komhlaba Wonke Ukukhiqiza Isidingo kanye Nokukhula KweDrayivu